Na pụrụ iche elu àgwà ese foto na iPhones Njirimara, foto inweta aghọ a ndụ omume ntụrụndụ. A click pụọ nke igwefoto na a magburu onwe foto ẹka. Dị ka a na-ahụkarị, foto na-enye pụrụ iche n'oge na ndụ ndị mmadụ na-uru na-echeta, na iPhones aghọwo nke igwe nke oke ruru ka ọ bụla ghara imeri igwefoto mkpebi ha na-enye ndị ọzọ dị ịrịba ama atụmatụ.
Otú ọ dị, n'ihi N'ezie, photos agbasaghị imubanye na weghara a otutu ohere na ekwentị ebe ha na-echekwa na nnukwu nha. Mgbe ụfọdụ foto ịnọ na-a mgbe adịru ohere na ike ga-eji na ngwa ma ọ bụ ndị ọzọ ọrụ na-eji elu. Ọ mere na-aghọ mkpa na mgbe a nyere oge na ikpochapụ ebe nchekwa ekwentị gị site ịlụ Bibie photos.
Ụzọ dị iche iche nke ihichapụ foto site na iPhones adị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ịmepụta ndabere na kọmputa tupu ihichapụ ọ bụla foto mere na photos nwere ike mfe-natara ma ọ bụrụ na erroneously ehichapụ. Ndị na-esonụ bụ ụzọ na ndị dị na ihichapụ foto site na iPhones.
1. Ihichapụ Photos otu otu.
2. Ihichapụ multiple photos.
3. Ihichapụ multiple foto na Obere oge
4. Ihichapụ foto gị Mac
5. Ihichapụ photos na-adịgide adịgide na Wondershare SafeEraser.
Nke a bụ otu n'ime ndị kacha ụzọ mee ka ihichapụ photos. Ọ bụ ihe kasị nkịtị usoro na-agụnye ndị na-esonụ:
Ẹkedori foto ngwa site na ịme ọpịpị na ya na n'ụlọ ihuenyo.
Enweta na foto ị chọrọ ka ihichapụ.
Enweta na ahịhịa na akara ngosi na gị nri akuku ihuenyo.
Ekwentị gị ga-ajụ ma ị chọrọ ka ihichapụ foto, ma ọ bụrụ na otú pịa ihichapụ na foto ga-ehichapụ.
Kama ihichapụ otu foto na oge ị pụrụ nanị họrọ ihichapụ multiple photos ozugbo. Ihichapụ multiple photos ozugbo bụghị nanị azọpụta oge ma na-enyekwa ndị ọzọ ohere gị iPhone na a mbụ ọsọ. E nwere ụzọ abụọ eme nke a. Mbụ usoro na-agụnye ndị na-esonụ:
Ẹkedori Photos ngwa.
Gaa Igwefoto Roll.
Enweta na "Họrọ" button na elu nri akuku nke ihuenyo.
Akara nile foto na ị chọrọ ehichapụ.
Enweta na na ahịhịa nwere ike na ala nri akuku nke ihuenyo na akara na photos ga-akpali gị ahịhịa.
Gosi na ị chọrọ ka ihichapụ foto na ị họrọ na pịa ihichapụ.
Alternatively multiple photos nwere ike ehichapụ site na foto ngwa site na oge taabụ. Iji mee nke a, na-eso atụ n'okpuru:
Kpatụ foto ngwa taabụ na n'ụlọ gị gị na ihuenyo.
Chọpụta foto taabụ na ala nke gị na ihuenyo na enweta ya.
The photos ga-mere ndokwa na a ụfọdụ iji dị ka na-egosi na ntọala.
Na elu nri akuku, ịchọta na họrọ oge ele.
Onye ọ bụla oge nwere obere họrọ caption nke mgbe họrọ akara niile foto nke ahụ nyere oge.
Na ala nke gị na ihuenyo, chọta na enweta na ahịhịa na akara ngosi na niile oge ga-ehichapụ mgbe gị na nkwenye.
Ka ihichapụ ọtụtụ photos na a nnọọ obere oge, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Jikọọ gị iPhone gị Mac site a syncing USB.
Ẹkedori image kpọọ.
Ịchọta na Họrọ image kpọọ ngwaọrụ site na iPhone.
Họrọ a ebe maka gị dị foto site na mbubata gbapụta menu.
Họrọ ndị ọzọ si selections nyere na mbubata gị niile foto na nchekwa.
Press 'Ctrl + A' si gị Mac iji họrọ foto niile.
Pịa Nhichapụ bọtịnụ.
5. Ihichapụ photos na-adịgide adịgide na Wondershare SafeEraser
Wondershare SafeEraser bụ na ekwentị mkpanaaka na ngwa na-nwere ike iji na-adịgide adịgide wepụ ehichapụ faịlụ site na ekwentị. Ehichapụ data ke n'elu kọwara ikpe na-adịghị na-adịgide adịgide obliterated na ike mfe-natara ebe ha na-etinye na a na nso nso-eji nchekwa. Ọ bụrụ na gị iPhone ẹdude mwute ozi na ị chọrọ ka e wee na-onwe na ị chere ka ehichapụ ya, ọ nwere ike Ewepụtara eduga njirimara na-ezu ohi site ihe n'enweghị ikike ọrụ.
Iji gbochie ndị dị otú ahụ itie, Wondershare mma nchicha na-eji. Ọ na-ewepu niile ehichapụ faịlụ, okosobo gị cache ebe nchekwa na gị nchọgharị akụkọ ihe mere na-adịgide adịgide. Ọ nwere ike na-eji na-ihichapụ kpam kpam foto na iPhones site na isoro usoro n'okpuru.
Download na wụnye ngwa na ekwentị gị.
Mgbe nwụnye nke software click on 'ihichapu ehichapụ faịlụ' na isi na ebe nchekwa na scanning usoro ga-amalite.
Mgbe iṅomi zuru ezu na-esonụ results na-nyere na-egosi onye ọ bụla akụrụngwa .Na results na peeji nke nke scanned ehichapụ faịlụ pịa "Photos" ma họrọ "Ihichapu Ugbu a,"
Pịnye okwu "Hichapụ" na dialog igbe. Nke a ga-egosi na ị chọrọ ka ihichapụ faịlụ. Mgbe nke a ị nwere ike pịa "ihichapu ugbu a" na-ọma wepụ foto na ị chọrọ ka ihichapụ.
Ozugbo a mere, a ozi ga-gbapụta confirming na faịlụ anọwo na-ehichapụ ọma.
Permenently Hichapụ Data on iPad
> Resource> ihichapu> 5 Solutions iji Hichapụ Photos si iPhone